Ny vahiny vita vaksiny feno dia afaka miditra any Etazonia manomboka amin'ny 8 Novambra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny vahiny vita vaksiny feno dia afaka miditra any Etazonia manomboka amin'ny 8 Novambra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ireo mpitsidika vita vaksiny feno dia afaka miditra any Etazonia manomboka amin'ny 8 Novambra.
Ny vaksinin'ny COVID-19 nankatoavin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) izay tsy ampiasaina na omena alàlana any Etazonia dia ekena ho endrika inoculation manan-kery, manome ny greenlight ho an'ny AstraZeneca novolavolain'ny UK, ary koa Sinopharm sy Sinovac any Shina.
Etazonia dia manala fetra fitsangatsanganana ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19.
Ireo mpitsangatsangana vahiny vita vaksiny feno amin'ny COVID-19 dia avela hiditra ao Etazonia manomboka amin'ny 8 Novambra
Ny politikan'i Etazonia vaovao dia tarihin'ny fahasalamam-bahoaka, henjana ary tsy miova, hoy ny White House.
Ny White House dia nanambara androany ny fanafoanana ny fetra fitsangatsanganana COVID-19, ary nilaza fa ny mpitsangatsangana vahiny rehetra izay voakaoka tanteraka manohitra ny coronavirus dia avela hiditra any Etazonia manomboka amin'ny 8 Novambra.
Ny sekretera mpanampy ny White House Kevin Munoz dia nanamafy androany fa “ny politikan'ny dia vaovao amerikana mitaky fanaovana vaksiny ho an'ireo vahiny mpizahatany any Etazonia dia hanomboka amin'ny 8 Novambra.”
Andriamatoa Munoz koa dia namoaka tao amin'ny Twitter fa ny politika dia “tarihin'ny fahasalamam-bahoaka, hentitra ary tsy miovaova.”
Strict Fepetra fitsangatsanganana any EtazoniaMpitsidika an-tapitrisany avy any Chine, Canada, Mexico, India, Brazil, ny ankamaroan'ny eropeanina tsy ho any Etazonia, no nampijanona ny fizahan-tany amerikana ary nampijaly ny toe-karenan'ny vondrom-piarahamonina.
Tamin'ny volana lasa teo, nilaza ny White House fa hampiakatra ny famerana ireo mpandeha an'habakabaka avy amin'ny firenena 30 mahery, ao anatin'izany i Shina, India, Iran, ary ny ankamaroan'ny Eropa hatramin'ny fiandohan'ny volana novambra, saingy nijanona tsy hanome daty marina izany.
Amin'ny talata, US Nilaza ny tompon'andraikitra fa hanafoana ny famerana hetsika amin'ny sisin-taniny ny firenena ary hiampita ny sambo miaraka amin'i Canada sy Mexico ho an'ireo vita vaksiny feno.
Vaksinin'ny COVID-19 nankatoavin'ny World Health Organization (OMS) izay tsy ampiasaina na omena alalana any Etazonia dia ho ekena ho endrika inoculation manan-kery, manome ny maitso ho an'ny AstraZeneca novolavolain'ny UK, ary koa Sinopharm sy Sinovac any Shina.
Nanokatra ny sisin-taniny miaraka amin'i Etazonia i Canada tamin'ny voalohan'ny volana aogositra ho an'ny Amerikanina vita vaksiny tanteraka tamin'ny fitsapana COVID-19 ratsy ho an'ny dia tsy ilaina. Ny tsy fahampian'ny valiny avy amin'ny mpifanila trano aminy kosa dia niteraka fitarainana avy amin'ny tompon'andraikitra kanadiana.
Ny fandraràna olom-pirenena tsy amerikana marobe miditra any Amerika dia nampiharina nandritra ny 18 volana mahery noho ny areti-mifindra voan'ny coronavirus. Ny filoha teo aloha Donald Trump dia nametraka fandrarana ny mpandeha an-habakabaka avy any Shina tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, ary avy eo nanitatra io fetra io ho an'ny ankamaroan'ny Eropa.
Ny Fikambanana Mpandehandeha Amerikanina dia namoaka izao fanambarana manaraka izao amin'ny fanambarana fa hanokatra ny sisin-taniny amin'ireo mpanao vaksiny iraisam-pirenena vita vaksiny i Etazonia amin'ny 8 Novambra:
“Efa ela ny fitsangantsanganana amerikana dia nitaky ny famohana soa aman-tsara ny sisin-taninay, ary raisinay ny fanambaràn'ny fitondram-panjakana Biden ny daty voatondro hitsenana ireo mpandeha iraisam-pirenena vita vaksiny.
“Tena zava-dehibe amin'ny daty ny daty hanaovana drafitra — ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ho an'ny orinasa tohanan'ny dia, ary ho an'ny mpandeha an-tapitrisany eran'izao tontolo izao izay hampandroso ny drafitra hitsidihana an'i Etazonia indray. Ny fisokafan'ireo mpitsidika iraisam-pirenena dia hanome fahasamihafana eo amin'ny toekarena ary hanafainganana ny fiverenan'ireo asa mifandraika amin'ny dia izay very noho ny fameperana ny dia.
"Mankasitraka ny fitantanan-draharaha izahay noho ny fanekeny ny sandan'ny fitsangatsanganana iraisampirenena amin'ny toekarentsika sy ny firenentsika, ary amin'ny fiasana hanokatra indray ny sisintaninay ary hampifandray an'i Amerika amin'izao tontolo izao indray."